Okumisiwe okuqinile (Sludge Concentration) Transmitter Manufacturers & Suppliers - China Kumisiwe Okuqinile (Sludge Concentration) Transmitter Factory
Imitha Yokuqina Emisiwe E-inthanethi T4075
Umgomo we-sludge okuhlushwa inzwa kusekelwe ekuhlanganisweni kwe-infrared okuhlangene kanye nendlela yokukhanya ehlakazekile. Indlela ye-ISO7027 ingasetshenziselwa ukuqhubeka nokunemba ngokunembile ukugxila kwendle.
Ngokusho kwe-ISO7027 ubuchwepheshe bokukhanya obusakazwa kabili obungathinteki yi-chromaticity ukuthola inani lokuhlushwa lendle. Umsebenzi wokuzihlanza ungakhethwa ngokuya ngemvelo yokusebenzisa. Idatha esitebeleni, ukusebenza okuthembekile; umsebenzi owakhelwe ngaphakathi wokuzihlola ukuqinisekisa idatha enembile; ukufakwa okulula nokulinganisa.
Imitha Yokuqina Emisiwe E-inthanethi T6075
Umgomo wenzwa yokuhlushwa yedaka ususelwe
ukumunca okuhlangene kwe-infrared kanye nendlela yokukhanya ehlakazekile. Indlela ye-ISO7027 ingasetshenziselwa ukuqhubeka nokunemba ngokunembile ukugxila kwendle.
Imitha Yokuqina Emisiwe E-inthanethi T6575
Izinsimbi Ezimisiwe Zedijithali (Ukuhlushwa kwe-Sludge) Inzwa
Umgomo we-sludge okuhlushwa inzwa kusekelwe ekuhlanganisweni kwe-infrared okuhlangene kanye nendlela yokukhanya ehlakazekile. Indlela ye-ISO7027 ingasetshenziselwa ukuqhubeka nokunemba ngokunembile ukugxila kwendle. Ngokusho kwe-ISO7027 ubuchwepheshe bokukhanya obusakazwa kabili obungathinteki yi-chromaticity ukuthola inani lokuhlushwa lendle. Umsebenzi wokuzihlanza ungakhethwa ngokuya ngemvelo yokusebenzisa. Idatha esitebeleni, ukusebenza okuthembekile; umsebenzi owakhelwe ngaphakathi wokuzihlola ukuqinisekisa idatha enembile; ukufakwa okulula nokulinganisa.
Izinsimbi eziMisiwe zeDigital (Sludge concentration) Inzwa enokuhlanza okuzenzakalelayo
Umgomo we-Suspended Solids (ukugxila kwe-Sludge) kusekelwe ekumungeni okuhlanganisiwe kwe-infrared nasendleleni yokukhanya ehlakazekile. Indlela ye-ISO7027 ingasetshenziselwa ukuqhubeka nokunemba ngokunembile ukugxila kwendle. Ngokusho kwe-ISO7027 ubuchwepheshe bokukhanya obusakazwa kabili obungathinteki yi-chromaticity ukuthola inani lokuhlushwa lendle. Umsebenzi wokuzihlanza ungakhethwa ngokuya ngemvelo yokusebenzisa. Idatha esitebeleni, ukusebenza okuthembekile; umsebenzi owakhelwe ngaphakathi wokuzihlola ukuqinisekisa idatha enembile; ukufakwa okulula nokulinganisa.
Ph Inzwa electrode, Inzwa Yokusebenza Kwenethiwekhi yeTitanium, Inzwa Yokusebenza Kwe-Electromagnetic, Inzwa yokuqhuba ye-TDS, Inzwa yeChlorophyll, Isizweli sokusebenza se-Quadrupole Graphite,